HomeWararka CiyaarahaManchester City oo qorsheynaysa wadahadalada Haaland bisha Janaayo
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay wadahadalo la bilowdo wakiilka weeraryahanka Erling Braut Haaland bisha January.
Haaland ayaa bartilmaameed u ah tiro ka mid ah kuwa ugu miisaanka culus Yurub ka dib markii uu dhaliyay 68 gool 67 kulan tan iyo markii uu Dortmund kaga soo biiray Red Bull Salzburg bishii Janaayo 2020.
City ayaa ka mid ah kuwa xiiseynaya xiddiga heerka caalami ee dalka Norway, inkastoo ay tartan adag kala kulmayaan kooxaha Real Madrid iyo Manchester United.
Si kastaba ha ahaatee, The Times ayaa sheegeysa in kooxda heysata horyaalka Premier League ay ku rajo weyn tahay inay Haaland ka dhaadhiciyaan inuu doorto Etihad Stadium oo ah meesha uu ku sii jeedo.
Ragga Pep Guardiola ayaa loo malaynayaa inay diyaar u yihiin inay wadahadal la galaan wakiilka Haaland bilowga sanadka cusub si ay ugu dhaqaaqaan suuqa xagaaga.
Haaland wuxuu qandaraas kula jiraa Dortmund ilaa 2024, laakiin qandaraaskiisa ayaa lagu bur-burin karaa 64 milyan oo ginni -bilowga July.
Tan iyo bilowgii 2020, kaliya weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa dhaliyay goolal ka badan Haaland tartamada oo dhan shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub.